हस्पिटलमा पैसा तिर्न नसक्दा सुत्केरी अलपत्र, २२ दिनको बच्चाको बिजोग…! – Gorkhali Dainik
October 7, 2020 520
अस्पतालमा उपचार गरेपछि त्यो उपचार खर्च समेत तिर्न नसकेपछि सुत्केरी अस्पतालमै छन् । करिब ५ लाख भन्दा बढी उपचार खर्च लागेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् । अहिले उनको सानो बच्चा घरमै छिमेकीको सहयोगमा हुर्किरहेका छन् ।परिवारका केही सदस्य अस्पतालमै छन् ।
अस्पतालले केही महिना अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने सल्लाह दिएका छन् । तर उपचार गर्ने पैसा नभएका कारण उनलाई घर ल्याउने तयारी गरिएको छ । तर डिस्चार्ज गर्ने पैसा नभएका कारण उनी घर आउन पाएकी छैनन् ।बच्चा जन्मिएको ३ दिन देखि नै छिमेकीले उनको नवजात शिशु हुर्काइरहेकी छन् ।
छिमेकी महिलाले राती पनि बच्चालाई उठेर खुवाउने गरेको बताएकी छन् । बच्चाको बुवाले ट्रयाक्टर चलाउने काम गर्छन । त्यसैले उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ । अहिले उनीहरु भाडामा बसिरहेका थिए ।कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएका कारण समस्यामा परेका उनीहरु अहिले सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यका कारण पनि थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गर्भवती अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा खान नपाएका कारण उनलाई समस्या आएको अस्पतालका चिकित्सकले जनाएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ति महिलाले पोसिलो खानेकुरा खान नपाएको छिमेकीको भनाई छ ।]
Prevसबै परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय ………..!
Next५ महिनाकी गर्भवती बालिकासँग धुमधामका साथ विवाह…….बन्यो भाइरल….!
“सरकारले कोरिया जान लागेका नेपालीहरुलाई काठमाडौंमै अल’पत्र पार्यो।”: गगन थापा